Steel iyo biibiilaha, iyo tuuboyinka Blind Flange, Nikkel Daawaha Tube - Houdong
ERW Steel tuuboyinka
SSAW iyo HSAW Steel tuuboyinka
Aarayo welded tuuboyinka
yeelida tuuboyinka iyo jiidh
Daawaha Steel tuuboyinka
Magnesium Daawaha Tube
Daawaha Hollow Tube
Titanium Daawaha tuuboyinka
API 5L tuuboyinka
SS tuuboyinka Tube
Ahama Steel tuuboyinka rakiban
Ahama Steel biibiile Tube aan xuduud lahayn
Steel ahama tuuboyinka Tube
Ahama Steel welded Tube
Biibiile suurawdo & Flange
Laabatooyinka oo Expansion
Sida loo doorto wax flange ahama?
sifooyinka gaarka ah ee daaweynta kulaylka dusha
Tayada dhigaysa suuqyada iyo daacadnimo u adeegta macaamiisha. Waxaan idinku soo dhawaynaynaa inaad in aad bixiso booqasho in ay Shirkadda iskaashiga iyo horumarinta labada dhinac.
Shirkadda ayaa magaalada ka diiwaan of 188 million yuan iyo daboolaa aag of 108 acres. Shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 2008. Shirkadda waxay leedahay saddex dhirta tuubooyin bir laan saddex khadadka-soo-saarka iyo biibiilaha steel muquuninta.
Soo saaridda iyo siin tuubooyin bir, iyo biibiilaha flange habboon
Waxaan leenahay qeybiyeyaasha isku halleeyey, akhrinta saxda ah ee suuqa gudaha, oo qiimihii ugu tartan ugu tayada sareeya. Bixinta macaamiisha kala duwan oo ay ka buuxaan adeegyo tayo waa mudnaanta koowaad.
Saaraha OF tuubbooyin iyo biibiile bir
shirkadaha ugu weyn ee ku takhasusay soo saarka iyo iibinta tubooyinka birta iyo tuubbooyin ee North Shiinaha
ERW 316ti Stainless St...
Hebei Houdong Pipeline Qalabka Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa zone horumarinta yanshan, gobolka Hebei, "Shiinaha qalabka dhuumaha saldhig saarka". Shirkadda ayaa magaalada ka diiwaan of 188 million yuan iyo daboolaa aag of 108 acres. Shirkadda waxaa la aasaasay sanadkii 2008 iyo "Hebei houdong qalabka dhuumaha Co., Ltd." waxaa la aasaasay sannadkii 2017. Shirkadda hadda ayaa shaqaalaha 160 oo in ka badan 30 personnel.Is xirfad iyo farsamo a collection of tuubbooyin steel, ningax daxalka, dhuumaha horumarinta technology iyo wax soo saarka, accessories dhuumaha wax soo saarka, qaybinta gaadiidka dhuumaha, ganacsiga gudaha iyo dibadda, sida mid ka mid ah shirkadda weyn warshadaha iyo ganacsiga group.
API 5L LSAW Steel higsadaan ku ahaan dadka Oil Gas Water Transp ...
FBE Epoxy Powder daxalka tuuboyinka
Ahama Steel Tee
321 / 321H ahama Steel tuuboyinka / Tube
309s / 310s ahama Steel tuuboyinka / tube
Ahama Steel welded tuuboyinka
macaamiisha Welcome to nagu tasho, waxaan aqbali 24 saacadood tashi, xirfadeed si ay u bixiyaan alaabta iyo adeegyada diiran iyo maskax leh
38F, No 88, wadada yincheng, Pudong degmada cusub, Shanghai, Shiinaha
7 maalmood toddobaadkii laga 10:00 am ilaa 6:00 pm
Hebei houdong qalabka dhuumaha co., Ltd. waxa uu ku yaalaa zone horumarinta yanshan, gobolka Hebei, "Shiinaha qalabka dhuumaha saldhig saarka"
Products Featured - Sitemap - Site Mobile
Welded ahama Steel tuuboyinka, Ahama Steel tuuboyinka, 316nb tuuboyinka ahama Steel , tuuboyinka ahama Steel , 2 inji ahama Steel tuuboyinka , 304 316 ahama Steel tuuboyinka ,